Imikhombandlela yolwazi ehlukahlukene yezifundo ezifundwayo ezahlukahlukene ezivela futhi mayelana ne-Afrika - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-XNUMi-Okthoba i-17 I-XNUMi-Okthoba i-17
Le ndatshana yanyatheliswa kwasekuqaleni ela-newsportal.com
"Ucwaningo Lwezemfundo nolwazi oluqhamuka e-Afrika kumele lutholakale mahhala kubo bonke abafisa ukuyisebenzisa, ukuyisebenzisa noma ukuyisebenzisa futhi ngesikhathi esifanayo bavikeleke ekusetshenzisweni kabi nasekusetshenzisweni kabi."
Lesi sokuqala ukuphuma "Izimiso Eziyishumi zase-Afrika Zokufinyelela Okuvulekile Kokuxhumana Kwabafundi" kuhlanganiswe ngabantu abasebenzela ukwakha ingqalasizinda yesimanjemanje ye-Open Science futhi babheke isimo sokucwaninga ezwenikazi lase-Afrika eminyakeni embalwa ezayo.
I-Open Access mhlawumbe yisihloko okuxoxiswana ngaso kakhulu nge-Open Science, kokubili e-Afrika nasemhlabeni jikelele. Umbono kanye nomsebenzi we-Open Science imayelana nemikhuba emihle yesayensi esikhathini sedijithali manje esizithola sikuso njengezifundiswa. Okuvimba umkhuba omuhle wesayensi emhlabeni wonke namhlanje yingxenye enkulu yokungalingani kwabashicileli bezinkampani eziqhuba inzuzo abakhokhisa imali yokuthenga izinkanyezi ngokufaka izihloko nokuzicubungula bese kuthi kamuva kufinyeleleke ezindabeni ezibuyekezwe ontanga ngemuva kokushicilelwa.
Ekukhanyeni komhlaba wonke NgoLwesihlanu ngekusasa ukunyakaza kanye Ama-SDG kuyacaca futhi ukuthi ukufinyelela okuvulekile kuphela ekutholakaleni okutholakele kokucwaninga kuzosivumela ukuthi sithuthukise ekunciphiseni ukuguquguquka kwesimo sezulu, sinciphise izingxabano nobuphofu futhi sibuyisele imvelo emhlabeni jikelele.
Kunokuphikisana okubonakala kuphikelela ekunikeleni kusuka kubacwaningi base-Afrika ekukhiqizeni isayensi yomhlaba wonke, ngenxa yokuntuleka kokubonakala kokuqukethwe okukhiqizwayo kuleli kanye nezwekazi. Noma kunenqwaba yamapulatifomu esayensi nokushicilelwa okuningana, lokhu kungenzeka kungaziwa kahle noma akubonakali ngokwanele. I-Open Science iyimoto ethembisayo yokunciphisa noma yokuqeda lokhu kuthanda esikhathini eside esedlule.
Ukufakwa okusebenzayo kwamaphimbo ezifundo ezivela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba kubalulekile ekwakhiweni kwengqalasizinda yomhlaba yezindlela ezivulekile zeSayensi evumela ukuthi kube nenkulumo elinganayo yesayensi kuzo zonke izifunda zomhlaba, izithiyo zolimi nezeluleko. Kwenzeka okufanayo ezingeni lesifunda ngaphakathi e-Afrika ebopha ukwahlukaniswa kwe-francophone / anglophone, kuthuthukisa ukuxhumana kwesayensi nomphakathi, ngamasu azisayo abakhi benqubomgomo ngokuthola kwakamuva kwesayensi futhi nohla luqhubeka. Ababambiqhaza abasemqoka kwezemfundo kufaka phakathi oNgqongqoshe bezemfundo kuzwelonke, imizamo yezinhlelo zokungena ngaphansi kwe-Open Access ne-Open data ibalulekile ekuqhubeni inqubo. I-African Open Science Platform ngisanda kuphetha iphrojekthi yeminyaka emithathu yeminyaka yokulingisa egcizelela ukuphuthuma kokutshala imali kwingqalasizinda yezemfundo yase-Afrika ukukhulisa ukuxhumana kwe-inthanethi kanye nokunikezwa kwamandla ukuze kuvunyelwe ukuphathwa kwedatha nokusingathwa kwedatha ezwekazini (xhuma kumbiko). Inhlangano esekwe eNairobi Ikhodi ye-Afrika ihlinzeka ngeplatfomu yeqoqo le-Open Data ukuvumela bonke ababambiqhaza bomphakathi ukuthi bathole imininingwane futhi bafunde emiphumeleni.
I-Open Science ishintsha ngokuphelele indlela ucwaningo nokuqukethwe kwesayensi okutholakala ngayo, okukhiqizwa ngayo futhi kusakazeke ngayo e-Afrika yonkana. Lokhu kufaka phakathi amandla ezakhamizi ezihlomisa isayensi okuholela kubahlali abaningi abajwayelekile hhayi abafundile bezizwe ezwenikazi lonke abanikwe amandla okusebenzisa idatha evulekile ukuvusa ukuthuthuka kwekhwalithi yempilo nokuphila kahle kwemiphakathi yabo kanye nemiphakathi ngobukhulu obuhlukahlukene izindawo, njenge ikhwalithi yomoya nokulawulwa kwezimoto zomgwaqo. Bona isibonelo umsebenzi we-Ghana-based Global Lab Network, ENigeria I-Vilsquare, Ese-Uganda Pollicy kanye ne-pan-African open science network I-AfricaOSH. The ukuqoqwa kwemininingwane yezemvelo ekuvikelweni kwezinhlobo zezilwane nasekubuyiselweni kwemvelo kungenye indlela okugxilwe ngayo ezindleleni zesayensi yezakhamizi ezwenikazi.
Kuleminyaka emi-3 eyedlule, kuye kwavela izinsizakalo eziningi namapulatifomu anikezela ukubonakala okuningi nokuzibandakanya okuphezulu kososayensi base-Afrika emhlabeni jikelele, njengamaphosta we-pan-African prerintories afana nefrophophone DICAMES kanye nezilimi eziningi I-AfricArxiv, Amaphephabhuku we-Open Access abhekisisa ngqo ucwaningo lwase-Afrika olufana Ucwaningo Olusha lwe-AAS, imizamo ehlukahlukene ye-Open Access kanye namapulatifomu, ukubala abambalwa. Izindatshana zocwaningo kulezi zinsuku ezitholakala online nge Ukucinga kwe-BASE, Vula Ulwazi Lamamephu futhi -Google Scholar. I-Open Science futhi isho okuningi - futhi okulula kakhulu - amathuba abacwaningi base-Afrika ukusebenzisana nabanye abacwaningi ezwenikazi nakwamanye amazwe omhlaba. Imitapo yolwazi eyengeziwe yanyuvesi iyangena I-DSpace amakhosombe wokukhishwa kocwaningo lomsebenzi wabo; thola ukubuyekezwa kwalokhu ngezwe at https://www.internationalafricaninstitute.org/repositories.
With I-AfricArxiv, inkonzo yethu eyinhloko ukusingathwa kwezinto ezisetshenziswayo kanye nezinye izindlela zokukhishwa kocwaningo mhlawumbe kososayensi base-Afrika kepha nososayensi abangawona ama-Afrika abacwaninga ngezihloko ezihlobene ne-Afrika. Ngaphezu kokwenza umphumela wokucwaninga okhiqizwe e-Afrika ubonakale kakhulu, kunezinye izinhloso eziningi esifisa ukuziphumeza, njengokukhuthaza ukusetshenziswa kwezilimi zasekhaya zase-Afrika kwisayensi, ukufaka amabhuloho phakathi kokuphuma kocwaningo lwe-anglophone ne-francophone, okwenza umqondo womqondo ovulekile Finyelela ukushicilela ezwenikazi lonke, kanye nokugqamisa ukuhambisana kolwazi lwendabuko kanye nendabuko esimweni sokucwaninga ngenkathi ngasikhathi sinye ukuvikela impahla ehlakaniphile yabantu bendabuko.
Sibala okufakiwe okungaphezulu kwama-60 okwamukelwayo kuze kube manje futhi esisanda kwethula kwethu imephu exhumana lapho abafundi bengabona khona ukuthi kulelizwekazi kwenziwe ucwaningo nokuthi ngababhali abavela kuziphi izikhungo. Ukusungula i-AfricArXiv ekuqineni kwezezimali sibheke emathubeni okuxhasa abalingani futhi singathanda ukuba nesizinda semininingwane ephethwe yisikhungo sokucwaninga sase-Afrika noma iyunivesithi.
Ukuphetha, sikucela ukuthi ufunde futhi usayine imigomo eyi-10 Yama-Afrika Wokufinyelela Okuvulekile ku-Scholarly Communication: https://info.africarxiv.org/african-principles-for-open-access-in-scholarly-communication. Uma uneminye imibono, imibuzo noma iziphakamiso sicela uxhumane nathi ku info@africarxiv.org.
Ababhali balesi sihloko ngamanye amalungu eqembu e-KiaArXiv:
UJustin Sègbédji Ahinon, uJoy Owango, u-Obasegun Ayodele, uLuka Okelo, u-Ahmed Ogunlaya noJo havemann
Funda ezinye izindaba ku- e-Learning Africa portal at ela-newsportal.com
umphumela. Susa izisetshenziswa, Donec ut adipiscing sit ipsum